Kompany: “Dadku way jeclaan lahaayeen inay arkaan fashilka Guardiola” | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Kompany: “Dadku way jeclaan lahaayeen inay arkaan fashilka Guardiola”
Kompany: “Dadku way jeclaan lahaayeen inay arkaan fashilka Guardiola”
Posted by: radio himilo May 6, 2017
Muqdisho – Kabtanka kooxda Manchester City, Vincent Kompany ayaa rumeysan in dadku ku raaxaysanayaan inay arkaan fashilka macalin Pep Guardiola, hayeeshe wuxuu sheegay inuusan abid isaga oo kale la shaqeynin.
Guardiola ayaa xagaagiisii ugu horreeyey la dhameysanaya City xilli aysan naawilayn inay ku nastaan hanashada koobka England PL, hayeeshe Kompany ayaa ku niyad-weyn in Guardiola uu kusoo bixi doono sida laga malaynayo – filashaduna fiican tahay.
“Shaxda iyo isku dubba-ridka macalin Pep waa wax aan horay loo arag, waana taas sababta dadku ay u fishaan inuu fashilo,” ayuu yiri. “Waa iska caadi in qof marar guuleystay uu mar kale haleeli waayo siduu jeclaa, taasi waxay abuurtaa warar iyo maadaysi.”
City ayaa ku fadhisa booska afaraad ee kala horreynta horyaalka PL waxaana u harsan afar kulan oo ay ciyaari doonto.
Previous: Dhageyso: Warbixin ku saabsan haweeneydii Soomaaliyeed ee hal-gamaaga aheyd
Next: Montella: Donnarumma waa sida ilmo – mana noqon karo kabtanka AC Milan.”
Maxaa ka dhaxeeya jimicsiga iyo xisaabta?
Iskuul ardaydiisa wanaagsan ku abaal mariya Ey
Gabar 12 jir ah oo ka qalin jabisay Jaamacad ku taalla Florida
La kulan: Halyayga lagu naaneyso Bogsiiyaha Lama-degaanka
Magaalo ku taalla Croatia oo guryaha lagu iibinayo wax ka yar hal dollar
La kulan: Ninka keligiis dib usoo nooleeyey Keyn gubatay!
Wadno doofaar oo badbaadiyay bukaan nolosha ka rajo dhigay
Maxaa kaaga imaan kara ku jimicsiga meel leh hawo wasakheysan?
Laba maalin oo aad soontaa isbuucii waxey kaa cawin kartaa inaad miisaanka iska dhinto
Qalab ogaan kara qofka been sheegaya oo la soo saaray
Shirkadda Facebook oo khasaartay $7 bilyan saacado gudahood
Bilyaneerada Caalamka oo sii hodmaya
Nin si fudud u lumiyay fursad uu milyineer ku noqon lahaa
Maxaa ku qasbi kara macaamiil inuu $5,600 u bixiyo hadiya ahaan?